बालबालिकाका असल साथी उत्प्रेरणाका खानी शिशिर सर, अब्बल कलाकार पनि | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ पुष २९ गते १०:११
जीवनको चार दशक पार गरिसकेका उनको शिक्षा भने अहिले जस्तो अंग्रेजी माध्यमको विद्यालयबाट भएन । भंगालमा स्थाई बसोबास गर्ने अधिकारीको नजिकैको सरकारी विद्यालय गणेश मा.वि.बाट यस एल सी पास गरेपछि अध्ययन कला क्षेत्रमा लाग्यो । विद्यालयदेखि नै अध्ययनमा पनि राम्रो र चित्रकलामा अब्बल भएकाले ललितकला क्याम्पस रोजाइृमा पर्यो । सो क्याम्पसबाट चित्रकलामा वि एफ ए गरेपछी त्यो समय नेपालमा एम एफ ए नभएकोले कतिपय साथीहरु विदेश तिर लागे तर उनी विदेश जाने इच्छा नभएकोले समाजशास्त्र विषयमा एम ए मा भर्ना भए । एस.एल.सी.पछी नै कमाई गरिहाल्नु पर्ने वाध्यता त थिएन तर पनि आफ्नै कमाइको मजाको बेग्लै हुने ठानी ब्यवसायिक कला सम्वन्धि काम गर्ने लगायत उनी स्कूलहरुमा चित्रकला शिक्षकको रुपमा पनि काम गर्न थाले । यसै गरी कर्मशिल हुने क्रममा लगभग एक दर्जन विद्यालयहरुमा कला शिक्षकको रुपमा काम गरेको अनुभव संगाल्न सफल भए । त्यो बेला कला सिकाएका विद्यार्थी अहिले केही स्थापित कलाकारै बने । आज विद्यालय क्षेत्रमै लाग्न त्यही केटाकेटीहरु संग रमाउने बानी संगत र वातावरणले अभिप्रेरित ग–यो उनलाई । केही साथीहरुको प्रभावमा समाजसेवामा पनि उत्तीकै रुचि थियो उनलाई । एस एल सी पश्चात नै केही साथीहरु संग मिलेर स्थानीय स्तरमा सृजनशिल समूह भंगाल नामक एउटा सामाजिक संस्था दर्ता गरी सामाजिक कर्ममा रमाएको कारण पछी सम्म सामाजिक कार्यमा रुची बढ्दै गयो । यसै क्रममा उनी सहितको सहभागीतामा अहिले नाम चलेको एक गैसस पनि दर्ता भयो । गैससहरुमा संलग्नताकै क्रममा देशका विभिन्न स्थानहरुमा भ्रमण गर्ने र विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीहरुमा सहभागी हुने मौका मिल्यो । एकातर्फ कला अर्कोतर्फ समाजिक संस्थामा संलग्नता, अनि शिक्षकको पनि अनुभवका कारण तालिम प्रशिक्षकका रुपमा पनि धेरै काम गरे उनले । विशेषगरी शहरी तथा ग्रामिण खानेपानी परियोजनाहरुमा तालिम दिएको अनुभव छ उनलाई ।
सोही क्षमताको कारण धेरै गैर सरकारी संंस्थाहरुमा तालिम समाग्री डिजाइन, सचेतना पोष्टरहरु, स्वस्थ्य र तालिम सम्वन्धि लगायत विविध पुस्तकहरुमा आफ्ना कला पस्कने अवशर मिल्यो उनलाई । उनको कला यतिमा मात्र सिमित भएन, ब्यड्ग्य चित्रको क्षेत्रमा पनि उनको राम्रो अनुभव छ । कुनै समय विमर्ष प्रकाशन सहित लगभग पौने दर्जन पत्रिकाहरुमा कार्टुनिष्ट र कला संयोजनको काम गर्थे भने केही पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गृहहरुमा पनि चित्रकारको रुपमा काम गर्ने अवशर मिल्यो । २०५३ सालमा ब्यङग्य चित्र प्रतियोगितामा देशका वरिष्ठ ब्यङ्ग्य चित्रकारहरु संग एउटै भिडेर तृतिय पुरस्कार हात पार्दाको क्षण जीवनमै सबैभन्दा खुसीको क्षण लाग्छ उनलाई । कलेज पढ्दै गर्दा पाँच हजारको सो पुरस्कार रासी यति ठूला लागेकोे थियो कि खाता खोलेर बैकमा जम्मा गर्नु प–यो ।
पुस्तकहरुमा चित्र तयार गर्ने क्रममा सबै भन्दा स्मरयीय भनेको डा. अरुणा उप्रेती संग एक अन्तराष्ट्रिय परियोजना अन्तर्गत अपांगका निमित्त विश्वब्यापी रुपमा प्रकाशन भएको अपांगको लागि हाते पुस्तक तयार गर्दाको क्षण हो । संसारका धेरै भाषामा प्रकाशित पुस्तक मध्ये नेपाली संस्कणको लागि छानिनुलाई गर्वको महशुष भएको छ । तर इन्टरनेटको विकास संगै हातैबाट गरिने कला संयोजनको काम विस्तारै विस्थाति हुन पुग्यो भने साप्ताहिक पत्रिकाहरुकोे पनि दिन गए संगै काम कम हुन थाल्यो । स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक तथा पत्रिकाहरुका लागि इन्टरनेटमै चित्र भेटिन थालेपछी कलाकारको काम घट्न थाल्यो । कहिलेकही राती एक बजे सम्म पनि ब्यस्त हुने अवस्थाबाट काम खोज्नुपर्ने अवस्था भयो ।
जीवनको सबैभन्दा दुखद क्षणको प्रसंगमा उनको अनुभव कम पिडादायी छैन । २०६६ सालमा श्रीमती ब्रेन ट्युमरको विरामी हुँदा विदेश लगेर पूर्ण समय उपचारमा खटिनुपर्दा नियमित गरिरहेका गैसस र परियोजनाका कामहरु सबै छाड्नुप–यो । उपचार पश्चत बाहिरबाट फर्किएपछि समय खाली हुनगयो तर त्यसैबाट विद्यालय संहाल्ने अवशर पनि जुट्यो । कला शिक्षकको रुपमा दर्जन जसो विद्यालयमा काम गर्दा तिनिहरुको ब्यवस्थापन गहिरिएर हेरेको अनुभवले सार्थकता पायो । २०६० सालमै आफू सहित भंगालका केही सकृय युवाहरुको पहलमा स्थापना भई विधिवत संचालन भएको अनिता मिलन इन्टरनेशनल एकेडेमीले त्यस पश्चात अर्को गती प्राप्त ग–यो । उनको सामाजिक संस्थाहरुमा संलग्नता पनि रोचक नै छ । धेरै सामाजिक संघ संस्था र गैर राजनैतिक संगठनहरुमा पनि संलग्न उनी जिम्मेवारीपूर्वक र लगनशिल भएर काम गर्ने स्वभावकै कारण होला प्रायः जिम्मेवारीमा सचिवकै पद आइलाग्छ उनलाई । बूनपाको लगभग १५०० धारा वितरण गरेको धोविढुंगा तल्लो भंगाल खानेपानी उपभोक्ता समितिमा पनि उनीले सचिवको भूमिका निर्वाह गदै आएका छन् ।
सूचना प्रविधिमा पनि रुची राख्ने उनी सामाजिक संजालमा पनि निकै सकृय देखिन्छ । दैनिक कर्म विहान पाँच बजे उठे पश्चात दैनिक पाँच किलोमिटर मर्निङ्गवाक पछि ग्रीन टि र दुईवटा स्याउ खानु विहानको नित्यकृया हो । विहानको समय घरायसी सरसफाई वा सामाजिक संजालमा ब्यतित हुन्छ । सामाजिक संजालमा पनि समाचार नै विशेषरुपमा हेर्ने र आफूलाई चित्त नबुझेको र मनमा लागेको कुरामा टिप्पणी लेखिहाल्ने बानी छ । विशेषतः राम्रा लेखकका उपन्यासहरु पढ्न रुचाउने अधिकारी लेखनमा पनि सकृयता देखिन्छ । कविता पनि फूर्छ, संगीतमा पनि रुची छ । उसो त आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई संगित सिकाउने गुरु पनि आफै नै हो तर त्यस विषयमा भने काम चलाउ ज्ञान मात्र भएको स्विकार्छन् । हरेक विषय र परिस्थितिमा सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ भन्ने सोच भएका उनी त्यसले नैे जीवनमा खुसी ल्याउन मद्दत गर्ने बताउँछन् । सामान्यतया चिया पसलमा बसेर समय ब्यतित गर्न मन नपराउने उनी सो समय सृजनशिल कार्यमा लगाउन सके समयको वास्तविक सदुपयोग भएझै लाग्छ । कला र संगीतको अलावा भ्रमण गर्न रुचाउने स्वभावका कारण देशका धेरै जिल्ला र प्रमुख गन्तब्य पुगिसककेको बताउँछन् । विदेश भने भारतको विभिन्न ठाउँहरु, थाइल्याण्ड र भुटान सम्म टेक्न भ्याएको रहेछ । हालसम्म चाहेर गर्न नमिलेको भनेकै विदेशतिरको भ्रमण नै हो ।
हालसम्म पनि संयुक्त परिवारमै रहनुभएका एक छोराका पिता उनको घरमा दैनिक एउटै भान्सामा खाने परिवारको संख्या ११ जनाको छ । आफ्ना दाजुभाई त संगै हुनुहुन्छ नै बुवाहरुको दाजुभाई समेत छुट्टिनु भएको छैन । संयुक्त परिवारको कुरा गर्दा सानातिना कुरामा नअल्झने, सहनशिल र एक अर्कालाई सजिलै माफ गरिदिने स्वभावका कारण यतिलामो समयसम्म संयुक्त परिवार सफल भएको बताउँछन् उनी । उसो त मेलमा जस्तो आनन्द विमेलमा कहाँ हुन्छ र ? कुनैपनि वस्तुमा गहिरो अध्ययन रुचाउने स्वभाव छ । संसारका सबै विषय त सम्भव पनि हुँदैन तर जुन विषयमा आफूलाई रुची लाग्यो त्यसमा सोध खोज अनुसन्धान नै गरेर गहिरो जानकारी राख्न रुचाउने स्वभाव छ । घरमा खरिद गरेको कुनै पनि सामानको, छ भने दुई तीन दिन लगाएर भएपनि पुरै म्यानुअल नै पढिसक्ने र पुरै जानकारी हासिल गर्ने अनौठो स्वभाव छ ।
मध्यम वर्गिय परिवारमा जन्मिएका उनीमा धेरै कमाउने भोक पनि छैन त्यसैले सेवामा नै रमाएका उनी भन्छन् – दालभात खान पुगेकै छ रहरहरु पुरा गर्न सक्ने घरको अवस्था छ, ज्यादा महत्वाकांक्षा छैन, जसरी पनि जीवनमा खुसी प्राप्त गर्नु हो त्यो पाएकै छु । साना साना खुसिहरु धेरै समेटिन सके जीवन सार्थक हुने लाग्छ । आफ्नो कारण अरु कसैको मुहारमा मुूस्कान छर्न सके त्यही नै जीवनको ठूलो खुसी लाग्छ भनी बताउने उनी त्यसै कारण पनि सो विद्यालयमा संलग्न भइरहन अभिप्रेरित भएको वताउँछन् । उनी संलग्न विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत संचालित कल्याणकारी विद्यालय हो । दाताहरु जुटाउने र नसक्नेहरुको लागि निशुल्क पढाउन दत्तचित्त भएर लागेका छन् उनी । सो विद्यालयमा पूरा शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थी बिस प्रतिशत भन्दा कमै छ । दाता जुटाउन बढी नै मेहेनत गर्नुपर्छ तै पनि थप मेहेनत गर्नुमै खुसी छन् । तर भन्छन्– ‘दुख त त्यो बेला लाग्छ जव निकै मेहेनत गरेर दाता जुटाई छात्रवृत्तीमा पढाएको विद्यार्थी नै पढाई पूरा नगरी स्कूल छाडेर जान्छ किनकी त्यो वेला हामीले दाताको विश्वास गुमाउछौ । फेरी खुसी त्यतिबेला लाग्छ जब ति बाबुनानीहरु पढाइको उच्च स्थानमा पुग्छन् वा सम्मानित पद पेशा ब्यवसायमा लाग्दा विद्यालयको योगदानलाई भुल्दैनन् र सम्पर्कमा रहिरहन्छन् ।’
सामाजिक सेवामा रुचीको वारेमा कुरा गर्दा प्रेरणाको श्रोत मिलनदेव भट्टराईलाई मान्छन् उनी । अहिले यो प्रचारमुखी जमानामा लाखौको सहयोग विभिन्न क्षेत्रतिर निरन्तर गरिरहँदा पनि प्रचार पटक्क नरुचाउने र अर्बाैको सम्पत्तीका मालिकको सामान्य जीवनशैली साँच्चै अनुकरणीय र प्रेरणादायी लाग्छ उनलाई । स्थानीय गेट पेपर इण्डष्ट्रिका मालिक भट्टराइले अनिता मिलन स्कूलको लागि आफै पनि र दाता खोज्नमा पनि ठूलो सहयोग पनि पुर्याई रहेका छन् । स्थानीय गोकुल थापा लगायतका साथिहरुको सहकार्य र सहयोग र सेवाभावले पनि विद्यालय सफल रहन मद्दत पु–याएको छ ।
हालसाल के गरिदैछ भन्ने सन्दर्भमा भर्खरै उनले बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट प्रकाशन गर्न लागको स्थानिय पाठ्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो बूढानीलकण्ठ नामक पुस्तकमा चित्रहरु तयार गर्ने काम सकिएको र कोभिडका कारण बन्द रहेको विद्यालय भर्खरै खुलेकोमा त्यसैमा ब्यस्त रहेका छन् । यस्तै भविश्यमा विद्यालयलाई विकास गरी ठूलो बनाउने र धेरै भन्दा धेरै बालबालिका लाभान्वित गराउन पाए धेरैको कल्याण हुनेथियो भन्ने सोच राखेका उनी स्थानीय सरकारले त्यस विद्यालयलाई वास्ता नगरेको प्रति भने थोरै खिन्नता महशुष गर्छन् । यस्ता विद्यालयलाई नगरपालिकाले विशेष संरक्षण प्रदान गरोस् र विकासमा सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा छ ।